Kedu ihe bụ akwu na ihe ọmụma banyere ala ọ na-akụzi? Network Meteorology
A priori, echiche nke mmuta O nwere ike ọ gaghị ada gị ka ihe ọ bụla. Anyị na-aga n'ọhịa nke geology nke nwere ihe dị iche iche nwere ike ime na-aga n'ihu ma nye anyị ọtụtụ ozi. Ka anyi tinye onwe anyi n’ime onodu udiri ihe nke uwa. Ọ bụ ebe a ka anyị na-ahụ mmekọrịta n'etiti ndị conglomerates. Uzo a nwere mmasi ichota ma nwee ike inye anyi ozi banyere gburugburu ebe obibi. Nime iwu nwere ọmụmụ banyere sedimenti ndị sitere na Ogechi ma ọ nwere ike ịba uru dị ukwuu ịnweta ozi ala nke otu mpaghara.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe niile ị chọrọ ịma maka akwu.
1 Gịnị bụ akwụ
2 Otu esi amata nest
3 Imbbricated clasts ozi
Imbbrication abụghị naanị sedimentation nke na-eme n'usoro usoro osimiri dị elu ma dị ala. Ebumnuche ya bụ maka nwughari ala, igbochi na mwepu nke ihe egwu dị na ụfọdụ usoro ọdịnala na mpaghara mpaghara. Iji na-amụ a akwụ, a stratigraphic ndekọ dị mkpa na Ọ na-enyere aka ịghọta ihe niile gbasara ala nke mejupụtara n'otu mpaghara ahụ.
Njikọ a nke clast ma ọ bụ conglomerates nwere ike inye anyị ọtụtụ ozi bara uru banyere otu otu nsị si malite. Anyị nwere ike ịsị na akwụ́ akwụ a bụ ịtụ iwu ihe mgbochi n’ime sedimenti o nakwa na ọ na - eme ka a na - etinye isi anyụike nịịle n ’otu n’ otu akụkụ na akụkụ ya na –eche na ntụzi nke ugbu a. Dị ka anyị kwurula na mbụ, ha bụ mmiri mmiri nke ihe osimiri gbanwere.
Iji ghọta ya nke ọma, anyị ga-enye ihe atụ nke mmiri na-ebugharị nke na-ebu ụfọdụ akụrụngwa nke gravel ma ọ bụ karịa dị ka ibu ala. Anyị na-echeta na njem nke sedimenti anyị nwere ike ịchọta ọtụtụ ụdị. Nke mbụ na-akpụ akpụ: ọ bụ njem nke nnukwu sedimenti nke na-eji nwayọọ nwayọọ na-agagharị na ala. Nke abụọ bụ nnu nnu: nnu nnu bụ mbugharị nke obere sedimenti nke dị obere nke na ha nwere ike ịgagharị na obere obere.
N'ikpeazụ, anyị nwere ụdị njem abụọ maka obere sedimenti ndị ahụ. Otu bụ floatation na otu bụ mgbasa. Flotata, dị ka aha ya na-egosi, bụ iga nke ụfọdụ ihe site flotation na mmiri. Ngbasaa bụ na ihe ndị ahụ pere mpe nke na-agbaze ha na mmiri.
Nke ahụ kwuru, anyị na-ekwu maka akwu ụlọ mgbe Ibu ala a bụ nke gravel ma ọ bụ karịa. Akara a nwere ogologo axis karịa ndị ọzọ, yabụ mgbe mmiri dị ugbu a na-efunahụ ike, ha na-anọgide na-edebe na ala ma tinye ya n'ọnọdụ nke, hydrodynamically, na-akwụsi ike karị.
Otu esi amata nest
Ọ na-apụta na a na-etinye nsị ndị a na-ebugharị site na mmiri mmiri n'ọnọdụ kachasị kwụsie ike. Ọ bụrụ na etinye clasts na a countercurrent uche, o yikarịrị ka ike nke otu ga-agbanwe ha ọzọ. Site na nnabata a nke yitewere, ọ ga - enyere anyị aka ịmata ma n’otu akụkụ ugwu na ihe omumu banyere ala enwere ụzọ mmiri n’oge gara aga.
Nsonaazụ ntinye nke ụyọkọ n'ụdị echiche iyi ahụ na-eme enwere ngwugwu nke ihe eji mara ihe nke oma.
Mgbe anyị jiri anya nke uche hụ ebe kpọdara akpọda dị na mmiri, anyị nwere ike ịhụ njirimara ndị a:
Usoro nke ụyọkọ na nkewa ihe nwere usoro mkpụrụ na-ebelata. Nke ahụ bụ, clasts ndị buru ibu na-abịaru nso na ntọala karịa ndị nke elu. Nke a bụ n'ihi na ike osimiri ahụ esighi ike iburu nnukwu sedimenti ahụ elu.
Anyị nwere ike ịchọta obere oghere n'etiti klọs abụọ, ya mere a ghọtara na ha nwere obere matriks. Nke a bụ, na etinyewo ihe ndị ahụ ọnụ.
Dị ka ọ dị, a na-emechi ọnụ ya nke ọma ebe ọ bụ na mmiri na-ebibi ọtụtụ n'ime ha. Ọ dị obere ịchọta ụfọdụ nkọ ọnụ.
Dika ejiri okpukpu kristos mee ihe, anyi nwere ike ichota ha na ochicho nke di n'otu uzo nke na egosiputa uzo mmiri di n'osimiri.
Imbbricated clasts ozi
Nchoputa a nile nke clasts echekwara n'otu uzo na-enye anyi otutu ihe omuma banyere otu esi etinye ihe ndi a. Ihe mbu bu itinye n'uche nhoputa nke nha na uzo doro anya nke achoputara. Nke a na-egosi na ọ nwere ike ịbụ na ndị njem na-agba aghara. Ọ bụrụ na a jikọtara ụyọkọ ndị ahụ ọnụ, ọ na-egosi na ụzọ osimiri ahụ dị obere ma to ogologo.
Njikọ ọnụ nke mkpochi na-ekpughe ntụziaka nke usoro mmiri iyi. Site na imata uzo ebe etinyere uzu mmiri a, anyị nwere ike ịmata ebe ụzọ mmiri si aga. Usoro nsị na ọnọdụ ọka na-ebelata na-egosi na osimiri anaghịzi enwe ikike ibufefe oge. Ọ na-egosikwa na enweela ụfọdụ ide mmiri ihe ndị buuru ngwongwo buru ibu ma gwupụta obere ọwa n'etiti silts aja nke nkwụnye ego mbụ.
Ọ bụrụ na anyị eleru anya, a na-ejikọta conglomerates na mgbanwe ihu igwe na tectonic niile na-eme n'oge. Ọzọkwa na nchikota nke ma. Usoro tectonic bụ ọrụ maka okike ridges, mbuli elu na enyemaka nke mpaghara ejedebe na mmejọ. Agbanyeghị, mmetụta ihu igwe bụ ihe na-enye ala iyi ndị a bụ na mmụba nke osimiri.
Dịka ị pụrụ ịhụ, site na ijikọ ọnụ nke ụyọkọ ahụ anyị nwere ike ịchọpụta ọtụtụ ozi gbasara ihe dị ebe ahụ ogologo oge gara aga. Enwere m olile anya na iji ozi a ị kari ịmụtakwu gbasara akwụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Gịnị bụ akwụ